FJKM Ankadindramamy Fahazavana » TORITENY 2020 – Alahady Paska 12 aprily
Paska 2020 - Alahady 12 aprily
Ry havana malala, miarahaba antsika rehetra. Indro indray atolotra ho anareo ny fandaharam-potoana ho amin’ny Alahady 12 Aprily 2020. Paska vani-potoana lehibe ho antsika Fiangonana. Ahatsiarovantsika fa nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy Tompontsika. Resiny ny fahafatesana , tanteraka ny famonjena antsika.
Paska 2020 – Alahady 12 Aprily 2020
Fandaharana amin’ny fanompoam-pivavahana
1. Hira : 141
a. Salamo 30. 1 – 5
b. Hira : 146
c. Vavaka fiderana
4. Fanambarana ny Sitrapon’Andriamanitra
a. Mpitarika : 1 Tes 5. 9-10 , 5-6
b. Rehetra : Salamo 119. 1 – 2
a. Vavaka fifonana
b. Hira : FF 35
6. Teny famelan-keloka
a. Mpitarika : 1 Jaona 4. 9 – 10
b. Rehetra : Salamo 32. 1 – 2
7. Fanekem-pinoana Apostolika
8. Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra
a. Hira : 190
b. Vavaka fangatahana ny Fanahy Masina
c. Vakiteny ( Joba 19. 25 – 29 ; Mar 16. 9 – 20 ; 1 Kora 15. 12 – 23 )
d. Hira : Ry Rainay Masina o !
e. TORITENY …
9. Vavaka fangatahana faranana amin’ny «Rainay Izay any an-danitra… »
10. Famaranana ny fotoana
a. Hira : 132
11. Hira : 735 ( Hira vavaka ho an’ny Firenana )
TORITENY , Alahady 12 Aprily 2020 , PASKA 2020
Joba 19. 25 – 29 ; Marka 16. 6 – 20 ; 1 Korintiana 15. 12 – 23
1 Kor 15. 12 – 23 no andraisana hafatra ho antsika. 1 Kor 15 no itondran’i Paoly Apostoly fampianarana, fampiorenana ny finoan’ny Fiangonana mahakasika ny fitsangana’ny maty. Ampahatsiahiviny eto fa tena nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy, izany fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty izany dia misy akony, misy fiatraikany, misy vokany eo amin’ny fiainan’ny mpino kristiana.
Ho antsika FJKM moa dia mandinika ny loha-hevitra hoe : «Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino ». Ny fandraisantsika, ny finoantsika fa maty nisolo voina antsika i Jesoa Kristy. Nandresy ny fahafatesana Izy, nisokatra ny fasana, nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy no fototra ahafahantsika mijoro ho vavolombelony eo amin’ny fiaraha-monina misy antsika.
Ndeha ary horesihana eto indray ny amin’izany fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty izany.
1. Fototry ny finoana Kristiana :
Hoy ny and.12… misy ireo sokajin’olona nilaza fa tsy misy izany fitsanganana amin’ny maty izany. Manazava araka izany i Paoly apostoly fa ny fitsanganan’i Kristy no antoka ho an’ny mino Azy fa ten misy ny fitsanganana amin’ny maty. Resy lahatra i Paoly, tena nino Izy fa nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Krsity. Nanokana ny fiainany manokana i Paoly apostoly nitoriteny, nampianatra izany. Fototry ny toriteny nataony ny mahakasika izany fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty izany mba hanana finoana marina ny Fiangonana.
Tena maty i Jesoa Kristy hoy izany mampianatra, tena nalevina ( and.3 -… ) kanefa na dia izany aza dia nitsangana nandresy ny fahafatesana i Jesoa Kristy. Rehefa nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy dia nihaona tamin’ireo mpianatra, ary isan’izay nihaona tamin’i Jesoa Kristy nitsangana tamin’ny maty i Paoly Apostoly ka izany no nampijoro azy ho vavolombelon’i Jesoa Kristy ka mitory sy manambara izany, eny miaro izany finoana izany fa ny fandresen’i Jesoa Kristy ny fahafatesana, ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no antoka fa mandresy ny fahafatesana izay mino Azy, ary azo antoka fa hitsangana amin’ny maty ihany koa rahatrizay. Mazava tsara ny fanambarany : «Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin’ny maty tokoa Kristy ho santatr’izay efa nodi-mandry » ( and.20 )
Ry havana malala, mankalaza izao Paska 2020 izao isika. Tarihina indray isika ampiorina ny finoantsika fa tena nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy. Ny olona nahita Azy, nisehoany dia sahy mijoro ho vavolombelona fa nitsangana marina tokoa Izy ( Mar 16. 9 … ).
Nitsangana tamin’ny maty Izy nanafaka ny olona tamin’ny endri-pahafatesana samihafa. Fantantsika ny toe-javatra nanjo ireo mpianatra rehefa voasambotra, notsaraina, maty, nalevina i Jesoa. Rava ny finoany… Jereo Mar 16. 14. Namatotra ny mpianatra ny tsy finoana, ny fahafatesana ara-panahy, ny tahotra. Fa rehefa niseho tamin’izy ireo kosa i Jesoa nitsangana tamin’ny maty dia velona ny finoany.
Afaka nijoro ho vavolombelona izy ireo. Toa izany koa i Paoly Apostoly namatotra ny fahafatesana ara-panahy, ny tsy finoana, ny fanenjahana ny mpianatry ny Tompo kanefa rehefa nisehoan’i Jesoa Kristy dia izao tonga vavolombelona marina izao. Tonga olon’ny finoana, endriky ny fitsanganana tamin’ny maty tokoa izany, velona ara-pinoana. Misy ny Mpino Kristiana, nijoro ny fiangonana.
Ho antsika mankalaza ny Paska ankehitriny inona no akon’ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty eo amin’ny fiainanao mankalaza izao Paska izao. Manao ahoana ny «Finoantsika » ?
Misy sokajin’olona tsy mbola maty ara-panahy tsy mety mino an’i Jesoa ho Mpamonjy tokana azo antoka. Misy ireo mbola variana amin’ny faharatsiana samihafa. Antso anao, tena nitsangana tamin’ny maty i Jesoa Kristy. Te-hanafaka anao amin’ny endri-pahafatesana samihafa Izy amin’izao fiainana diavinao izao. Eny te-hanome antoka ho anao Izy fa tena misy ny fitsanganana amin’ny maty hanana anjara amin’izany ianao raha-toa ka midona aminao ny fahafatesana. Azo antoka fa hitsangana amin’ny maty tokoa ianao rahatrizay.
Fa manoloana ny valan’aretina COVID-19 , manao ahoana ny finoana ? Ny olona tena mino an’i Jesoa Kristy kosa dia tsy manatahotra manoloana izany, mametraka ny adiny, ny fiainany amin’i Jesoa Kristy. Apetraho amin’i Jesoa Kristy Tompo ny fiainanao dia ho azo antoka fa ho mpandresy ianao. Jereo ny finoana nanan’i Joba, Joba 19. 25 ….
2. Azo antoka ny famonjena ny mino Azy
Mandresy lahatra hatrany i Paoly Apostoly, manazava izy fa ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia manafoana ny fahotana namatotra ny zanak’olombelona : «ary raha tsy natsangana Kristy … dia mbola amin’ny fahotanareo ihany ianareo » ( and.17 ). Toa manamafy i Paoly Apostoly fa nanafaka ny zanak’olombelona tamin’ny fatoran’ny fahotana ny fahafatesan’i Jesoa Kristy sy ny fitsanganany tamin’ny maty.
Isan’ny foto-pampianarana atolony ho an’ny Fiangonana eto amin’ity 1 Kor 15 azontsika jerena manokana ny and.1 – 4 …. Maty noho ny fahotan’ny zanak’olombelona i Jesoa Kristy, natolotr’ Andriamanitra hisolo voina ny mpanota, natolotr’Andriamanitra handrava ny efitry ny fisarahana teo amin’Andriamanitra sy ny olona ( Isaia 59. 1 – 2 ).
Hoy ny and.21 – 23… I Jesoa Kristy voahombo teo amin’ny hazo fijaliana no nitondra ny fahotan’ny zanak’olombelona, ny zanak’olombelona no tokony hiharan’ny didim-pitsarana ho faty noho ny fandavana an’Andriamanitra. I Jesoa no maty teo amin’ny hazo fijaliana, nalevina kanefa nitsangana tamin’ny maty no nanehoany fa resiny izany. Resiny ny fahafatesana, afaka tamin’ny fatoran’ny fahotana ny zanak’olombelona mino izany asam-panavotana lehibe izany, azo antoka ny famonjena ho an’ny mino Azy.
Ry havana malala, ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no antoka ho amin’ny famonjena antsika. Tena azo antoka ny famonjena antsika raha manaiky fa mpanota, eny fa maty noho ny fahotantsika i Jesoa Kristy nefa nitsangana , natsangan’Andriamanitra mba handray ny fahavelomana, ny fiainana amin’ny alalany isika. Ary tsarovy fa izany indrindra no nahatonga an’i Jesoa Kristy, rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy dia naniraka ny mpianatra hanao ho zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara ho famonjena antsika ( Mar 16. 15 )
Ry havana malala, mbola maro ny olona misalasa ny hoe : tena misy ve ny famonjena ? misy koa ireo mbola mitady lalam-pamonjena hafa. Mankalaza ny Paska 2020 ianao ankehitriny na aiza na aiza no misy anao fahasoavan’Andriamanitra ho anao izany. Tiany mba ho isan’ny olomboavonjy ianao satria efa natsangan’Andriamanitra tamin’ny maty tokoa i Jesoa Kristy izany lala-tokana handraisanao ny famonjena. Ny anjaranao dia ny mino Azy, manaiky handray ho anao ny fahafatesany. Izany anie no fijoroana nataon’i Paoly Apostoly e ! iverenana kely ny 1 Kor 15. 1 – 4 … Ho aminao ny famonjen’ny Tompo.